Home Wararka Gudaha Maxaa ardayda jaamacada Afrika looga reebay barnaamijka fiiso la’aanta UK?
Hannaanka cusub ee fiisaha UK oo ujeedku yahay in lagu soo jiito dadka heerka sare ka gaaray aqoonta ayaysan ku jirin jaamacadaha Afrika kuwa diiwaangashan ee ardayga ka baxa uu ka faa’iideysan karo nidaamkan cusub ee fiiso la’aanta lagu galayo UK, loogana shaqaysan karo shuruud la’aan.
Dad badan ayaa cabasha ka muujiyay in jaamacadaha Afrikaanka ah aysan ku jirin diiwaanka jaamacadaha la doonayo, inkasta oo qofka Afrikaanka ah ee dhigta jaamacadaha diiwaanka ku jira ay ka faa’iideysan karaan hannaankan.
Sida loo qorey diiwaanka jaamacadaha ugu wanaagsan ee adduunka ayaa ka dhigan in wax jaamacad Afrikaan ah aysan soo galin.
Si qofka uu u helo fursaddan cusub ee fiiso la’aanta ah waxaa qasab ah in uu dhigtay mid ka mid ah 50-ka jaamacadood ee adduunka ugu wanaagsan sida ku xusan Qiimeynta Jaamacadaha ee loo yaqaano Times Higher Education World Universities Rankings, Quacquarelli Symonds World University Rankings, ama The Academic Ranking of World Universities
37 jaamacadood ayaa ku jira liiskaasi, intooda badana waa Maraykanka, qaar Yurub ahina waa ku jiraan iyo Asia.
“Qiimeynta noocani ah waxa ay tixgalin siisaa shuruudo u hiilinaya jaamacado la asaasay boqolaal sano ka hor, kuwaas oo haysta qarashaad badan oo lagu kabo” ayay tiri Amina Axmed Al Imam oo ka tirsan jaamacadda Ilorin ee dalka Nigeria, taas oo u warantay majalladda New Scientist.
“Maadaamaa aan ahay qof Nigeria ka yimid, shahaadada PhD-gana ku diyaariyay Britain, waa arrin niyad jab ah in ay weli jiraan nidaamyo gacan bidxeynaya dadka Afrikaanka ah” ayay intaasi ku dartay.
“Ma waxa ay ka dhigantahay in uusan jirin qof jaamacad Afrikaan ah ka qalin jabiyay oo leh xirfad iyo aqoon sare?”. Ayay is weeydiisay Aamina.
Aqoonyahano kale ayaa qanacsanaan la’aan ka muujiyay in aysan liiska ku jirin jaamacado Koonfurta Aasisa ah, Laatiin Amerika ah amaba Afrikaan ah.
Christopher Trisos oo ah agaasimaha cilmi-baarista ee jaamacadda Cape Town ayaa BBC-da u sheegay in habkani cusub ee fiisaha UK ku bixineyso uu yahay mid saaid xaq daro u ah.
Wuxuu sheegay in haddii UK ay doonayso in ay xal gaarto arrimaha taagan ee deegaanka, tamarta iyo xanuunada, waa in ay aqoonsataa aragtiyada iyo aqoonta kala duwan ee dadyoowga adduunka ku nool, gaar ahaan kuwa soo koraya.
Ingiriiska oo dal-ku-gal shuruud-la’aan ah siinaya dadka soo dhameeyay jaamacadaha qaar
Shirkadda Visa oo raaligalin ka bixisay cillad ku timid kaararka
Mareykanka oo Haweeney u khafiifiyay xayiraad dal dhan saarneyd
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha UK ayaa sheegay in arrintani ay dhiirogalin doonto in jaamacado kale ay horumariyaan tayadooda, islamarkaasna ay liiska ka galaan meel wanaagsan.
Waxa uu intaas ku daray in jaamacadaha liiska ku jira ay dhigtaan arday ka kala timaada adduunka.
Muxuu yahay hannaanka fiiso la’aanta ee UK ?
Aqoonyahannada ka qalinjebiya jaamacadaha ugu sarreeya adduunka ayaa fursad loo siin doonaa inay tagaan waddanka UK, iyagoo ka faa’iidaysan doona barnaamij cusub oo ay ugu talagashay dowladda.
War kasoo baxay dowladda Ingiriiska ayaa lagu sheegay in barnaamijka ay fiisaha ku heli karaan ‘dadka ay suurtagalka tahay inay heer sare iyo horumar gaaraan’. Wuxuu furmayaa maanta oo Isniin ah. Ujeedku waa in lagu soo jiito ‘dadka ugu fiican uguna firfircoon’, iyadoo looga faa’ideysnayo in lala qabsado billowga nolosha shaqaalennimo ee ardaydaas.
Qofka danaynaya dal-ku-galka UK ee hadda loo furay aqoonyahannada ayaa looga baahan yahay inuu kasoo qalinjebiyay mid ka mid ah jaamacadaha ku jira liiska 50-ka jaamacadood ee ugu sarreeya caalamka.
Liiska Jaamacadaha ay ardaydoodu fursadda fiican u haystaan barnaamijkan, laga soo billaabo 2021-kii, waxaa ka mid ah 20 jaamacadood oo ku yaalla Mareykanka, oo ay ku jiraan Harvard, Yale, iyo MIT.
Waxaa kale oo jiray 17 jaamacadood oo kale oo ardaydooda ay fursaddan heli karaan, waxaana ka mid ah Jaamacadda Hong Kong, Jaamacadda Melbourne iyo Jaamacadda Paris Sciences et Lettres.
Dal-ku-galka waxa uu qiimihiisa noqon doonaa £715 oo ay sii dheer tahay lacagta canshuurta caafimaadka oo dadka soo galootiga ah lagu siinayo adeegga caafimaad ee ay bixiso hay’adda NHS.
Dadka barnaamijkan fursadda u hela waxay UK gayn karaan xubnaha qoysaskooda, inkastoo looga baahan yahay inuu soo galo dhaqaale joogto ah oo ah ugu yaraan £1,270.
Waxaa sidoo kale looga baahnaan doonaa inay ka gudbaan imtixaanka dhinaca amniga iyo dambi-baarista ayna si fiican u garanayaan luuqadda Ingiriiska.
Barnaamijkan ayaa yimid kaddib markii ay dowladda UK samaysay isbeddello dadka ajaanibta ah loogu oggolaanayo in ay soo galaan, kana shaqeystaan gudaha Ingiriiska muddo ilaa labo sano ah halkii ay markii hore ku khasbanaayeen inay waddanka ka baxaan marka ay Jaamacadda dhammeeyaan.
Previous articleBadri Cabdicasiis Saalax, ninka Maraykanka hal milyan dul dhigeen oo lagu qabtay xadka Soomaaliya
Next articleIreland: Nin Soomaali ah oo loo ogolaaday inuu raadsado magdhaw kaddib sano badan oo uu qalad u xirnaa
DEG-DEG: Barcelona Oo Man United Ka Diiday Dalabkii Cusbaa Ee Ay...